(SAWIRRO) Dallada PUNSAA oo qabatay shir ku saabsan xalinta khilaafaadka xuduudaha. | puntlandi.com
(SAWIRRO) Dallada PUNSAA oo qabatay shir ku saabsan xalinta khilaafaadka xuduudaha.
Dallada ururada bulshada rayidka ah ee Puntland (PUNSAA), ayaa maanta qabatay shir labo maalin soconaya oo looga hadlayo xalinta khilaafaadka xuduudaha Puntland.
Shirkaan ayaa lagusoo bandhigay Daraasad laga sameeyay xalinta khilaafaadka, taasoo waxyaabaha ay kasoo baxay ay kamid yihiin in wacyi galin balaaran lasiiyo dadweynaha, sidoo kalena dowladda Puntland lagala hadlo sidii loo magacaabi lahaa guddi qaabilsan xalinta khilaafaadka xuduudaha.
Wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha Puntlad, Cabdulaahi Maxamed Xaashi iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaas Maxamed Cali Nuur (Jubba), ayaa lagu casuumay shirkaan, iyagoo wax laga weydiinayay siyaasada dowladda uga qaadan xalinta muranada ka taagan xuduudaha, kuwaas oo cabaqad ku ah in la gaaro nidaamka dimuqraadiyada.
Agaasimaha fulinta PUNSAA, BAshiir Siciid Ismaaciil, ayaa sheegay dallada PUNSAA inay wado tilaabooyin sahlaya inay Puntland ka dhacaan doorashooyin xor ah, si taas loo gaaro wuxuu sheegay inay sameeyeen Daraasado lagu ogaanayo waxyaabaha hortaagan gaarista barnaamijka dimuqraadiyada.
Guddoomiyaha PUNSAA, Faysal Axmed Warsame, ayaa sheegay shirkaan ay qabteen inuu yahay wada tashi ah oo muhiimadiisu yahay calaamadinta xuduudaha, wuxuuna intaas ku daray in lagasoo saaridoono bayaan loo dhan yahay oo ay ku midaysan yihiin dallada PUNSAA iyo wasaaradda arrimaha gudaha.
Wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha iyo agaasimihiisa guud, ayaa ka hadlay shirkaan waxayna uga mahad celiyeen dallada PUNSAA kaalinta ay ka qaadanayso baahinta dimuqraadiyada. Waxay kaloo soo dhoweeyeen Darasadaan ay ka sameeyeen caqabadaha xuduudaha ka taagan iyo talo ay soo jeediyeen ee ku saabsan in bulshada la wacyi galiyo.